माओवादीकी यी महिला सांसदको काण्ड बाहिरियो, उपद्रो मच्चाएपछि कर्मचारीले थर्काएर पठाए – GALAXY
माओवादीकी यी महिला सांसदको काण्ड बाहिरियो, उपद्रो मच्चाएपछि कर्मचारीले थर्काएर पठाए
जनकपुरधाम । संघमा माओवादी केन्द्रका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानीको स्रोत खुलाउन नपर्नेगरी कालोधनलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । आफ्ना नातागोत टाजिरहेका छन् । यता प्रदेशमा माओवादी महिला सांसदले उपद्रो मच्चाइरहेकी छन् ।
प्रदेश २ की माओवादी सांसद प्रमिला यादवको उपद्रोले मधेसमा खैलाबैला भएको छ । आफ्नो श्रीमान् चढ्ने मोटरसाइकलको कर मिनाहा गर्न प्रमिलाले यातायात कार्यालय लहानलाई निवेदन नै लेखेकी छन् । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका-२ घर भएकी यादव माओवादी केन्द्रकी समानुपातिक सांसद हुन् । उनले श्रीमानलाई आफ्नो स्वकीय सचिव बनाएकी छन् ।
श्रीमान् अशोक यादव चढ्ने स. ३ प. ८८४८ नम्बरको मोटरसाइकलको २०७८ सम्मको कर छुट गरिदिन प्रमिलाले यातायातमा निवेदन लेखेकी हुन् । निवेदन लिएर १५ दिनअघि अशोक यातायात कार्यालय पुगेका थिए । तर, यातायात कार्यालयले छुट दिएन् । कमर्चारीले थर्काएर पठाए । यातायात प्रमुख मीन भट्टराईले कर छुटका लागि मन्त्रीस्तरकै निर्णय चाहिने भन्दै फिर्ता पठाए । कर्मचारीबाट नहुने कुरा आएपछि उपद्रो गरेकी सांसद थचारिइन् । अन्तत बाध्य भएर कर तिर्न परयो